उदयशमशेर राणा - कान्तिपुर समाचार
समृद्धिको कसीमा कर
भाद्र १७, २०७५
कर वृद्धिले सबैको ध्यान तानेको छ । स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर बढाए । जुनसुकै वस्तुमा कर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । खोला तर्नेदेखि डोकामा तरकारी बेच्नेसम्मलाई कर लगाउने निर्णयले नागरिकप्रति राज्य कठोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक साताअघि जारी गरेको श्वेतपत्रले यतिबेला देशको अर्थतन्त्रबारे बसह सिर्जना गरेको छ । उनले श्वेतपत्रमार्फत भन्न खोजेका छन्, देशको ढुकुटी रित्तो छ । देशको आर्थिक स्थिति शून्यमा छ ।
तरलता अभाव किन ?
चैत्र ९, २०७३
केही समययता नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एकपटक समस्याग्रस्त बनेको छ । बैंकहरूले गर्ने लगानीको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ नयाँ लगानी कम हुने निश्चित छ भने अर्काेतर्फ लगानीकर्ताहरूले सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आई अर्थतन्त्रमा थप समस्या हुनेछ ।
उदयशमशेर राणाका लेखहरु :